Dowlada oo soo Bandhigtay Qorshaha Waxbarasho ee Sanadka 2013 // Warbixin | KEYDMEDIA ONLINE
Dowlada oo soo Bandhigtay Qorshaha Waxbarasho ee Sanadka 2013 // Warbixin
Muqdisho (KON) - Wasaarada Waxbarashada iyo Adeegga Bulshada ayaa Maanta si rasmi ah usoo bandhigtay Qorshaha Waxbarasho ee Sanadka 2013, Qorshahaas wax lagu barayo Hal Milyan oo Arday oo Soomaali ah oo ku kala nool gobollada dalka.
Wasiirrada wasaarada horumarinta iyo adeegga bulshada, Maryan Qaasim Axmed oo ka hadashay kulan magaalada Muqdisho ay kula qaadatay qeybaha bulshada oo looga hadlayay horumarinta waxbarashada ayaa waxay sheegtay in ay wasaaraddeedu waddo qorshe waxbarasho loogu fidinayo ardayda aan fursadaha u helin in ay iskuul aadaan.
Kulankaan oo Maantay lagu qabtay Hotel Jaziira ayaa kasoo Qeybgalay qaybaha bulshada sida: Aqoonyanno, culumaa’uddiin, waxgarad haween, xildhibaanno iyo qaar ka mid ah bahda waxbarashada iyo jaamacadaha ka jira dalka.
Qorshahaan ayaa loogu talagalay inay ka faa’iideystaan Ardayda Soomaliyeed ee aan heysan fursadaha Waxbarasho kaddib markii ay saameyn ku yeesheen Dagaaladii Dalka soo maray.
"Soomaaliya Afar Milyan oo Caruur, da'dooduna ka hooseyso 18 Sano ayaa haysan waxbarshadii iyo Xanantii ay u baahnaayeen" Ayee tiri Maryan Qaasim.
“Wasaaraddu iyadoo ka duulaysa arrintaas, kana damqaneysa waxay isku duba-ridday qorshe waxbarasho oo ballaaran kaasoo aan jecelnahay inay ka faa’iideystaan arday gaaraysa hal milyan oo uu kala qaybsan heerarka kala duwan ee waxbarashada, waxaana hirgelinta qorshahaas gacan naga siinaya qaar ka mid ah hay’adaha Qaramada Midoobay oo dhawaan aan kula soo kulmay Nairobi.”
Sidee Wasiirraddu sheegtay waxaa a diyaarinayaa 900 Dugsi oo isugu jira kuwo cusub iyo kuwii hore oo dayactir lagu sameynayo, Tababar la siin doono Macalimiinta.
Maryam Qaasim ayaa sheegtay in arrintan oo ay gacan ka geysanayaan qaar ka tirsan hay’adaha Qaramada Midoobay looga gol leeyahay in lagu soo afjaro waxbarasho la’aanta heysata carruur badan oo Soomaaliyeed oo gaaray xilliga iskuulka.